Imibuzo - Xhosa
Uyacelwa ukuba uphendule imibuzo elandelayo ngokupheleleyo nangokuchanekileyo; ubuyise kwakhona uxwebhu olugcweleyo kwisebe leGeophysics. Lonke ulwazi lubalulekile ngako oko iphepha lemibuzo malibuyiselwe. Nokuba akukhange uluve ungcangcazelo okanye unyikimo, naleyo ngokwayo lulwazi olubalulekileyo ( Sinqwenela ukwazi zonke iindawo apho ongcangcazelo okanye unyikimo lomhlaba beluviwe/ belungaviwanga.
Intshukumo: ( ukucotha/ ukukhawuleza). Ixesha elingakanani?
Luviwe ngubani (abanye/ abaninzi/wonke umntu/ umbukeli).
Luviweb phi: (endlini/ kwisakhiwo/ phandle/ emotweni- inqwelo-mafutha).
Kwisakhiwo: (seplanga –umthi / sezitena/ esakhiwe kakuhle/ esingakhiwanga kakuhle/ kumgangatho wokuqala njalo njalo.).
Ubusenzani ngexesha unyikimo beluvakala: ( ujikeleza/ ungqengqile phantsi/ uhleli phantsi).
Iviwe ngaphandle: ( abanye/ umbukeli/ ozolileyo/ ojikelezayo).
Icala ibisiya kulo: ( eMntla/ eMntla- Mpuma/ eNtshona/ eZantsi/ eMpuma, njalo njalo.
Ngaphantsi komhlaba wakwalapha ekuhlaleni: ilitye/ Isanti/ ophasalakayo- ompasalala/yabetheka/umhlabathi omanzi/ugcwele/emqengqelezi/ ethe tyaba, njalo- njalo.)Ground underneath locality: rock/ sand/ loose/ compacted/ marshy/ filled/ sloping/ level, etc.)
Ukho umntu oye wavuka: (akakho/ abanye/ abaninzi/ wonke umntu) endlwini/ kwisakhiwo) / ekuhlaleni)?
Ingaba ukho ( akakho/ abanye/ abaninzi/ wonke umntu) ebesoyika (endlini/ kwisakhiwo/ ekuhlaleni)?
Ukushukuma kwee (festile/ iingcango/ izitya).
Ukuqhekeka/ukucandeka kwee ( Ndonga/ isakhiwo/ nj, nj).
Izinto ezixhonyiweyo/ ezijingayo/ elucangweni/ nj nj. (zaa/ azizange) zishukumele ( emntla/ emntla- mpuma/eMpuma/ eMzantsi- Mpuma/ eNtshona nj-nj).
Imithi/ amatyholo ashukuma (kancinane/ phakathi/ kakhulu)
Ingaba izinto ezincinane okanye ifenitshala yashukuma yasuka esihlalweni?
Ingaba iivazi/ izinto ezincinane/ iibhotile / izitya/ ifenitshala / nj- nj) yashukuma / yasuka esihlalweni / yawa phantsi?
Ingaba isamente eseludongeni/ iifesitile/ iindonga/ iitshimini/ umgangatho) wacandeka?
Ingaba iintlobo- ngeentlobo zempahla yokuhombisa/ iincwadi/ imifanekiso ekwisakhelo/ iindonga) zawa?
Ingaba iipleyiti zokutyela/ iifesitile/ ifenitshala) zaqhekeka/ zatyoboka?
Ingaba (iitshimini/ intsika- umqulu/ imifanekiso eqingqiweyo/ imiqondiso yendlela yeenqwelo – mafutha/ amatye esikhumbuzo/izakhiwo eziblulekileyo) zagoba/ zaabhenqeka/ zaphothana/ zawa zajijeka/ zagqwetheka/ zabhijeleka?
Umonakalo (zange ubekho/ wabamncinane/ waba phakathi- mkhudlwana/ wabamkhulu).
Umonakalo (eplangeni/ isitena/ ikhonkrithi- isamente exutywe nesanti negrabile/ umsebenzi wamatye- umqingqi matye- umakhi- umeslani).Damage to (wood/brick/masonry/concrete).
Thetha unike amanqakwana
Singanxibelelana na nawe ukufumana olunye ulwazi kuwe?
Imibuzo - Zulu
CGS Earthquake Safety Tips